ကိုးမေးလ် - အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာအီးမေးလ် App ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » ကိုးမေးလ် - အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာအီးမေးလ် App ကို
ကိုးမေးလ် - အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာအီးမေးလ် App ကို APK ကို
ယနေ့အီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေး၏အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းသို့မဟုတ်သင့်နေ့စဉ်ဘဝများတွင်လူ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်အရေးပါအရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏လုပျငနျးအတွက်အကျိုးရှိစွာဆက်သွယ်ရေးထက် ပို. အရေးကြီးသောအရာမရှိဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကိုး Microsoft Exchange ActiveSync ကို အသုံးပြု. Microsoft Exchange Server ကိုအတူတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်တိုက်ရိုက် Push ကိုနည်းပညာအပေါ်အခြေခံ Android အတွက် full-စုံတဲ့အီးမေးလ်က application ဖြစ်ပါတယ်နှင့်လည်းလုပ်ငန်းရှင်များသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးရှိသည်ဖို့လိုခငျြတဲ့သူသာမန်လူများ, သူငယ်ချင်းနှင့်မိသားစုဝင်များများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ အချိန်မရွေး, ဘယ်နေရာမှာမဆို။ သငျသညျပြီးသား Android အတွက်ကတခြား, E-Mail က apps များနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်သင့်လက်ရှိအတွေ့အကြုံ, ငါတို့ကပိုအရာအားလုံးထက်ထက်သင်ကထိပ်တန်းအတှေ့အကွုံကိုငါပေးမည်။ ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များမှတဆင့်သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင် E-Mail က, ဆက်သွယ်ရန်, ပြက္ခဒိန်, Tasks ကိုများနှင့်မှတ်စုများပြုကြရန်တွန်းအားပေးသင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာသင်၏အချိန်လျော့နည်းစေသည်။Key ကို features တွေ
- Exchange ActiveSync နှင့်အတူတိုက်ရိုက် Push ကိုထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း။ ကိုးအသုံးပြုသူရဲ့ကိုး data တွေကိုသိမ်းထားဖို့မဆို server ကိုမရှိပါ။ ကိုး app ကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုသူ server ကိုဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ အားလုံးကိုးအချက်အလက်များကိုသာအသုံးပြုသူ device အတွက်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
- မဟာအအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို & လှပသော GUI ကို
- ပြက္ခဒိန်များနှင့်အဆက်အသွယ်များ (စတော့ရှယ်ယာပြက္ခဒိန်နှင့်ကိုးအကောင့်နှင့်အတူဆက်သွယ်ရန်လျှောက်လွှာသို့ပေါင်းစည်း)
- Rich-စာသား Editor ကို
- လိုင်း Cert
- ကို Global လိပ်စာစာရင်း (Gal)
- အကြိုက်ဆုံး Folder ကို (ကတစ်ကြိမ်မှာအထူး folder ထဲမှာ Sub-ဖိုလ်ဒါအပါအဝင်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျအပေါငျးတို့သထုတ်စစ်ဆေးနိုင် Be)
- တွန်းအားပေးရန်ကို Select လုပ်ပါဖိုင်တွဲများ (တစ်ဦးချင်းစီဖိုင်တွဲနှုန်းအီးမေးလ်သတိပေးချက်)
- ရုံး 365, ချိန်းအွန်လိုင်း, Hotmail, Live.com, Outlook, MSN ကိုသို့မဟုတ် Google Apps ကပနဲ့တူအများအပြားလူကြိုက်များအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အလိုအလျောက် setup ကို
- အပြည့်အဝ HTML ကို (ဘက်က, အပြင်ထွက်)
- Secure Sockets Layer (SSL) ကို
- Hybrid ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်ရှာရန် (အစာရှောင်ဒေသခံရှာဖွေရေးနှင့်အွန်လိုင်းရှာဖွေရေးနှင့်အတူပေါင်းစပ်)
- စကားပြော Mode ကို
- မဖတ်ရသေးသည့်တံဆိပ် (Nova Launcher ကို, Apex Launcher ကို, DashClock နှင့် Samsung, Sony က & LG က devices များ)
- Widgets (မဖတ်ရသေးသည့်တံဆိပ်, Shortcuts, အီးမေးလ်စာရင်း, Tasks ကိုစာရင်းနှင့်အစီအစဉ်ပြက္ခဒိန်)
- SMS ကိုထပ်တူပြုခြင်း (အိတ်ချိန်း 2010 နှင့်အထက်)
- Android Wear ထောက်ပံ့
- မှတ်စုများ Sync ကို (အိတ်ချိန်း 2010 နှင့်အထက်)
- Tasks ကို Sync ကို (ထပ်ဖြစ်မှုနှုန်းလုပ်ငန်းများ, သတိပေးချက်, အုပ်စုများ)
ထောကျပံ့ Server များ
- အိတ်ချိန်းဆာဗာအထက်တွင် 2003 SP2 / SP3 နှင့်
- ရုံး 365
- က Google Apps ကပ
- အခြားဆာဗာများ (IBM ကမှတ်စုများကို Traveller, Groupwise, Kerio, Zimbra, Horde, IceWarp, MDaemon စသည်တို့) Exchange ActiveSync ကိုထောက်ခံ
- ပြင်ပသိုလှောင်မှုမှပူးတွဲကူးယူရန်နှင့်ကိုး settings ကိုတင်ပို့ဖို့။
- ပြင်ပသိုလှောင်မှုထဲကနေ attachment များကိုတင်သွင်းနိုင်ရန်နှင့်ကိုး setting များကိုတင်သွင်းဖို့။
- server ကိုရန်လက်ခံရရှိ SMS ကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန် (ActiveSync ကို function ကို)
- SMS ပို့နိုင်ရန်ဆာဗာကို (ActiveSync ကို function ကို) မှလက်ခံရရှိ
- ဆာဗာကိရိယာသတင်းအချက်အလက်ကယ်နှုတ်တော်မူရန် (ActiveSync ကို function ကို)
- လိုင်စင် purchasing များအတွက်အကောင့်အသုံးပြုရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်စနစ်တွင်မှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်အကောင့်။
- အထက်က Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) နှင့်
ကိုးမိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေမခံဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာအမှန်တကယ်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သင်၏အကောင့် '' စကားဝှက်တွေကိုသိုလှောင်ပါသည်။ ကိုယ်ကသာအမှန်တကယ်မေးလ်ဆာဗာများချိတ်ဆက်။ ကိုယ်ကသာ device ကိုပေါ်ရှိသင့်မက်ဆေ့ခ်ျများသိုလှောင်ပါသည်။
- သင်မေးခွန်းတစ်ခုတစ်ခုသို့မဟုတ်အထူးတောင်းဆိုချက်အရရှိပါကရုံ support@9folders.com အီးမေးလ်ပေးပို့နှင့်ငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်ပြန်သင်ရလိမ့်မယ်။
* ပြက္ခဒိန်အချိန်ဇုန် Update ကိုပြဿနာပြင်ဆင်ခြင်းများ
* အထပ် iCal ဖိတ်ကြားချက်ကိုတွေ့ဆုံအပေါ်ကိစ္စကိုပူးတွဲပြုပြင်မှုများ
အီးမေးလ်တွေပေးပို့တဲ့အခါ * အချည်းနှီးသောခန္ဓာကိုယ်ပြဿနာပြင်ဆင်ခြင်းများ
* Rich စာသားကိုအယ်ဒီတာကိုပိုကောင်းစေ
* တော်တော်များများ bug တွေပြုပြင်မှုများ
ကိုးမေးလ် - အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာအီးမေးလ် App ကို
26.39 ကို MB
9Folders Inc က